Omenala ndị Hawaii ọ bụ Ngwaahịa a ga-eji azụ ịnyịnya site na njem?
Home » Akụkọ Njem njem Hawaii » Omenala ndị Hawaii ọ bụ Ngwaahịa a ga-eji azụ ịnyịnya site na njem?
Hawaii na-edekọ ndekọ ọnụ ọgụgụ ndị mbata na-arịwanye elu n'agbanyeghị ọrịa na-aga n'ihu, mana Hawaii Tourism Chief Jon de Fries nwere nchegbu ndị ọzọ. Ọ na-ahụ na ọdịbendị ndị Hawaii agbadatala ọzọ ka ọ bụrụ naanị ngwaahịa, ma na-alụ ọgụ na Senate nke Hawaii maka ijikwa ịchịkwa Taxtụ Ulo Obibi.
Taa, anyị hụrụ na ọdịbendị anyị nke Hawaii na-agbadata ọzọ ka ọ bụrụ ngwaahịa nkịtị nke enwere ike ịzụ ahịa ịnyịnya, na omume a na ụkpụrụ akụkọ ihe mere eme ga - akwụsị - ma ga - akwụsị, na elekere m na HTA (Hawaii Tourism Authority)
Okwu ndị a esiteghị na nlekọta ọdịbendị ma ọ bụ gburugburu ebe obibi, ma ọ bụ nzukọ na-emegide ụlọ ọrụ ndị ọbịa, kama sitere n'aka John De Fries, nwoke na-ahụ maka iwughachi ụlọ ọrụ njem na njem na Hawaii.
Lelee mmeghe site Patricia Herman, VP nke Marketing maka HTA n'ihu ndị World Tourism Network (WTN) tupu izu a. WTN bụ mkparịta ụka zuru ụwa ọnụ na ndị isi njem nleta na mba 127
Russia nwalere ụgbọelu buru ibu nke mbụ Russia na-esote Soviet Russia
Igwe igwe na-atụgharị uche maka ụgbọelu India
United Airlines gbasawanyere enyemaka enyemaka ndị India
Akụkọ banyere njem Nepal
Nepal na-akwụsị ụgbọ elu mba na nke mba niile na-agba ọsọ COVID-19 ọgba aghara